Lufthansa, SWISS and Austrian Airlines will be offering food and beverages in Economy Class in 2021 | Airline News
Ikhaya » Iindaba zeenqwelo moya » ILufthansa, i-SWISS kunye neeAirlines zaseAustria ziya kubonelela ngokutya kunye neziselo kwiKlasi yezoQoqosho kwi2021
ILufthansa, i-SWISS kunye neeAirlines zaseAustria ziya kubonelela ngokutya kunye neziselo kwiKlasi yezoQoqosho kwi2021
Kungekudala, LufthansaI-SWISS kunye neAustria Airlines ziya kubonelela abathengi bazo uluhlu olutsha lweenkonzo kwiKlasi yezoQoqosho. Ukuqala ngentwasahlobo yowama-2021, abakhweli kwiindlela ezimfutshane nezihamba kancinci baya kuba nakho ukuthenga ukhetho olubanzi lokutya okuphezulu kunye neziselo ebhodini ukuze zilungele iimfuno zabo.
Imigangatho esemgangathweni esemgangathweni iyaphunyezwa kuluhlu olutsha ukusuka kukhetho ukuya kulungiselelo kunye nokunikezelwa. Ngombono omtsha, iinqwelomoya nazo zityala imali eninzi kuzinzo ngokukhetha iimveliso ezinobungozi kwindalo esingqongileyo kunye nokupakisha nangokunciphisa inkunkuma yokutya ngemveliso eyenziwe ngokwezifiso.
UChristina Foerster, olilungu leBhodi eLawulayo yeLufthansa Group ujongene noMthengi, noXanduva loShishino. “Isibonelelo esitsha siphuhlisiwe ngesiseko sempendulo evela kubathengi bethu. Ngoncedo olukumgangatho ophezulu olufumanekayo xa kuthengwa, abakhweli bethu bazokwazi ukwenza isigqibo sokuba bafuna ukutya ntoni nokusela ntoni kuhambo lwabo. ”
Uluhlu lokutya kunye neziselo ziya kufumaneka kwiinqwelomoya nganye ngeendlela, ezinye zazo ziya kuba nezalathiso zommandla. Ugxininiso luya kuba kwiimveliso ezintsha kunye nokukhethwa kokutya okulula. I-snack esemgangathweni, yokuncoma ayisayi kuphinda inikezelwe kwixesha elizayo.
Isibonelelo esitsha siya kuqaliswa ngezigaba ukususela ngentwasahlobo yowama-2021: Iinqwelo-moya zaseAustria ziya kuqala, zilandelwe yi-SWISS neLufthansa; iimveliso ezintsha ziya kutyhilwa ziinqwelomoya nganye kwezi nyanga zizayo.